A0722 နံပါတ်အောက်ရှိ ZTE မိုဘိုင်းဖုန်းသည် TENAA မှရရှိသည် Androidsis
ZTE သည်အမေရိကန်နှင့်မကြာသေးမီကဖြစ်ပွားခဲ့သောပconflictsိပက္ခများကြားမှ တရုတ်ကုမ္ပဏီသည်နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကိုရပ်ဆိုင်းထားသည် သင့်ရဲ့မူလအစ။ မကြာသေးမီကကြေငြာခဲ့သည့်အတိုင်း၎င်းကိုအောက်တွင်ငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သည် သဘောတူညီချက်.
ကောင်းပြီ၊ အဓိကအကြောင်းအရာအတွက်၊ ကုမ္ပဏီ TENAA အတွက်ပစ္စည်းအသစ်တစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်, ဤတူညီသောအားဖြင့်လက်မှတ်ရရှိခဲ့သည်။ ZTE A0722 အကြောင်းပြောနေသည်။ မိုဘိုင်း၏အမည်မှာစီးပွားဖြစ်နာမည်နှင့် ပါတ်သက်၍ မည်သည့်အရာကိုမဆိုဈေးကွက်ထဲ ၀ င်ရောက်နိုင်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏အမည်ကိုပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။
TENAA ဒေတာဘေ့စ်အရ ZTE A0722 တွင် ၅.၄၅ လက်မမျက်နှာပြင်ရှိပြီး ၁၄၄၀ x ၇၂၀ ပစ်ဇယ် resolution (HD +) ကို ၁၈ ခုပုံစံအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။၉. တချိန်တည်းမှာပဲ 9GHz clock frequency နဲ့ octa-core ပရိုဆက်ဆာတပ်ဆင်ထားတာကြောင့်ကုမ္ပဏီဟာ 1.4 စီးရီးဒါမှမဟုတ် Mediatek က Snapdragon ကိုရွေးချယ်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ ထို့အပြင် 400GB နှင့် 3GB အသီးသီးသိုလှောင်နိုင်သည့် 4GB နှင့် 32GB RAM အမျိုးအစားများပါ ၀ င်သည်။
ဓာတ်ပုံအပိုင်းကဏ္ographicနှင့်စပ်လျဉ်း။ ၊ ZTE တွင် 13 megapixel resolution ရှိသည့်နောက်အဓိကအာရုံခံကိရိယာကိုအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည် ဘယ်ဘက်အပေါ်ထောင့်တွင်ရှိပြီး selfie နှင့်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများကိုပြုလုပ်ရန်အတွက် 5MP ရှေ့မျက်နှာစာတပ်ဆင်ထားသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကွန်ပျူတာတွင် Android ၏ Oreo ဗားရှင်း 8.1 ကိုအသုံးပြုထားသည်အရွယ်အစား ၁၄၇ x ၆၉.၅ x ၇.၉ မီလီမီတာ၊ အလေးချိန် ၁၃၅ ဂရမ်၊ ကင်မရာနားတွင်ရှိသောကျောဘက်တွင်လက်ဗွေဖတ်သည့်ကိရိယာရှိပြီး 147mAh ဘက်ထရီတပ်ဆင်ထားသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားကောင်းမွန်ပြီးလက်ခံနိုင်သောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းကိုစတင်မိတ်ဆက်သည့်အချိန်တွင်တရုတ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းသူသည်မော်ဒယ်လ် ၂ ခု - အနက်ရောင်နှင့်အပြာတစ်ခုစီကိုမှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » A0722 နံပါတ်အောက်ရှိ ZTE မိုဘိုင်းသည် TENAA မှအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိသည်